သောသီခို: လွတ်တော်ကိုးစားလှယ် မဟာဗမာဝါဒီတကောင်နှင့် BBC မေးမြန်းခန်း
လွတ်တော်ကိုးစားလှယ် မဟာဗမာဝါဒီတကောင်နှင့် BBC မေးမြန်းခန်း
ခွေးမသားတို့ ရဲ့ သဘောထားကို တိုင်းရင်းသားအပေါင်းတို့ နားထောင်ကြဟေး....
လူစိတ်မရှိတဲ့ခွေးတွေ သူတို့ ရဲ့ စောက်သုံးမကျတဲ့ဦးနှောက်ကအဲဒီလောက်ဘဲစဉ်းစားနိုင် စွမ်းရှိကြောင်းကို အရှက်မရှိစွာကြေညာလိုက်တာဘဲ။ အဲဒီလောက်ဦးနှောက်နဲ့ လွှတ်တော်ထဲဝင် ထိုင် ရဲသေးတယ်။
ိ်ဒီ ဗမာစစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနှင့်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဟာ ဟိုးအရင်ကတည်း
က အပြောနှင့် အလုပ်ဟာနည်းနည်းလေးမှမှားလို့ မရပါဘူး..ဆိုလိုချင်တာက အထက်ကခွင့်မပြုဘဲ၊ အထက်ကမသိဘဲ၊ အထက်ကသဘောမပါဘဲ ဘာကိုမှ
လုပ်ခွင့်၊ပြောဆိုခွင့်မရှိပါဘူး..အခုဒီ အရပ်သား အရေခြုံ စစ်သား က ဒီစကားကိုလွတ်တော်လို နိုင်ငံတစ်ကာမြင်၊ လူအများမြင်နိုင်ကြားနိုင်တဲ့နေရာမျိုး၊သတင်းဌာနာဆိုင်ရာတွေကတောင် တစ်ရားဝင်အရှက်..အကြောက်တစ်ရားကင်းမဲ့စွာ ဒီစကားကို ပြောရဲတယ်ဆိုတာ..ဒါသူတို့ ရဲ့ ဗမာစစ်အစိုးက ဒီလို အတွင်းစိတ်ရှိနေလို့ ဘဲ.
ပြောရဲတာ.ဒါဟာ ဗမာအရပ်သား အစိုးရအရေခြုံ စစ်အစိုးရရဲ့ .သဘောထားဘဲ.
ပြီးတော့ ဒီအစိုးရအဖွဲ့ ထဲ မှာဗမာတွေသာ ပါတာများတာမို့ဒါဟာဗမာတွေရဲ့
တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်ထားတဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲလို့ ကျုပ်ပြော
ချင်တယ်..ဒီလိုပြောလို့ တစ်ခြားဗမာတွေက မကြည်ဖြူဘူးဆိုရင်တော့စောရီး
ပါဘဲ..ခင်ဗျားတို့ မကြိုက်ဘူးဆိုရင် ..အဲဒီ ကျုပ်ရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာမဟုတ်မှန်
ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ သက်သေပြ...လမ်းပေါ်စီတန်းလမ်းလျှောက်တာ ..စကား
လေးနဲ့ ဖော်ပြတာလောက်တော့ ဒီပြာသာနာဟာ လုံးဝမပြေလည်နိုင်ပါဘူး..
ဒုတိယကမ်ဘာ စစ်တုံန်း က ဟစ်တစ်လာဟာတစ်နိုင်ငံတော်တော်များကို တိုက် ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီး ဂျုးလူမျိုးပေါင်းမြောက်များစွာကိုလည်းရက်စက်စွာနိပ်စက်ညဉ်းပန်းသတ်ဖြတ်
ခဲ့ပါတယ်..သူ့ ရဲ့လုပ်ရပ်ဟာလူမဆန် ရက်စက်လွန်းတာကြောင်း သူ့ ရဲ့ စစ်တပ်အတွင်းက ဗိုလ်မှုးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ (COLONEL CLAUS VON STAUFFENBERG နှင့်သူ့ ရဲ့ အဖွဲ့တွေက) ဒါဟာ ဂျာမနီနိုင်ငံနှင့်ဂျာမနှီလူမျိုးတွေအကုန်လုံးရဲ့ သဘောထားမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကမ်ဘာ၊နိုင်ငံတစ်ကာကိုသက်သေပြတဲ့အနေနှင့် ဟစ်တလာကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဘို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်(ဟစ်တလာကိုအဆိတ်ခတ်သတ်ဘို့ ကြိုးစားခြင်း၊အစည်းအဝေးခန်းထဲတွင်ဗုံးခွဲပြီးသတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်း)..ဒါကြောင့်သူတို့ ရဲ့လုပ်ရပ်ဟာမအောင်မြင်ခဲ့ပေမည့်တစ် ကမ်ဘာလုံး က သူတို့ ရဲ့ သဘောထားကို အသိအမှတ်ပြု လက်ခံခဲ့ပါတယ်.ကျုပ်ဆိုချင်တာက ခင်ဗျားတို့ သိန်းစိန်နောက်ကကြိုးကိုင်နေတဲ့ မြေခွေးတွေနှင့် မင်းအောင်လှိုင်ကို
လုပ်ကြံသတ်ဖြတ် ဘို့ အထိ မဆိုလိုပါဘူး...လမ်းပေါ်မှားလမ်းလျှေက်တာတို့ ..စကားလေးနှင့် ပြောတာတို့ ထက်နည်းနည်းလေးပိုပြီးထိရောက်တာလေးကို လုပ်ပြီးခင်ဗျားတို့ ရဲ့သဘောထားကိုဖေါ်ပြဘို့ ထောက်ပြတာပါ..ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ ခင်ဗျားတို့ အကုန်လုံးဟာကျုပ်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးရဲ့ရန်သူဘဲဆိုတာ အထက်က ဗမာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးက သက်သေပြနေသလိုဖြစ်နေပါပြီး